Shacabka Japan oo u dareeray goobaha codbixinta
Malaayin qof oo uu dhashay dalka Japan ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashada guud ee dalkaasi oo ah mid laga soo horumariyay wakhtigii loo asteeyay.
22 Oktoobar 2017
Isqabqabsiga madaxda maamul goboleeyada iyo kuwa federaalka muxuu sababi karaa?
Shalay ayey aheyd markii madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ay si wadajir ah u soo saareen war saxaafadeed ay ku dhaliileen dowladda federaalka.
Xisbiga Jubilee oo ku adkeysanaya in Kenya ay doorasho ka dhaceyso
Iyadoo afar maalmood oo kaliya ay ka harsan doorashada madaxtinimada ee ku celiska ah ee Kenya ayaa waxaa su'aal la gelinayaa hufnaanta Guddiga Doorashooyinka.
Nidaam cusub oo dadka lagu barayo astaamaha dhimirka maskaxda oo Hargaysa laga billaabay
Barnaamijkan oo uu soo hindisay Dr Ibrahim Cismaan Ciye, ayuu ku sheegay inuu uga gol-leeyahay in bulshada ay ku barato astaamaha lagu garto xanuunnada dhimirka ku dhaca.
Madaxa WHO oo ka fiirsanaya go'aankii uu Robert Mugabe ugu magacaabay safiir sharafeedka hay'dda.
Madaxa cusub ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo go'aankii uu ugu magacaabay madaxweynaha Zimbabwe, Robert Mugabe, inuu hay'addaasi caalamiga ah u noqdo safiir sharafeed.
Hooyo labo wiil ku weyday weerarkii Muqdisho
Iyadoo toddobaad laga joogo markii uu dhacay qaraxii lagu halaagsamay ee ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, ayaa weli waxaa socda gurmadka loo fidinayo dhibanayaasha iyo dadkii ay dhibaatadi kazoo gaartay.
21 Oktoobar 2017
Madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo Madaxweynaha maamulka khaatumo Dr Cali Khaliif Galleyr oo xalay magaalada Ceynabo ku kala saxiixday heshiis
Lixdan ku dhimatay weerarao ka dhacay Afghanistan
Saraakiisha laamaha ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ku dhawaad lixdan qof ay dhinteen ka dib markii weeraro lagu qaaday labo masjid oo ku yaalo dalka Afghanistan salaadii Jimcaha.
CIA: Kuuriyada Waqooyi waxay qarka u saarantahay inay Nukleyr ku dhufato Mareykanka
Agaasimaha hay'ada sirdoonka Mareykanka ee CIA Mike Pompeo ayaa ka digey in Kuuriyada Waqooyi ay qarka u saran tahay in ay awood u yeelato in ay gantaal Niyukleer ku garaacaan Mareykanka.
50 Askar oo ka tirsan ciidamada Masar oo lagu dilay isku dhacyo ka dhacay dalkaasi
Wasaarada Arrimaha gudaha Masar ayaa sheegtay in ugu yaraan 53 ka tirsan ciidamada ammaanka ay ku dhinteen ka dhacay Saxaaraha galbeedka Masar.
Tirada dadkii ku dhintay qarixii Soobe oo gaartay 358
Dowladda Soomaaliya ayaa xalay shaacisay tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qarixii dhawaan ka dhacay isgoyska soobe ee magaalda Muqdisho.
Askar ka tirsan booliiska Masar oo Qaahiro lagu dilay
Ugu yaraan 14 ka tirsan booliiska dalka Masar ayaa ku dhintay isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada ammaanka iyo koox looga shakisan yahay in ay mintid yihiin.
Weeraro ismiidaamin ah oo lagu qaaday Misaajido ku yaalla Afqaanistaan
Saraakiisha dalka Afqanistan ayaa waxay sheegeen in 60 qof lagu dilay laba weerar oo ismiidaamin ah oo lagu qaaday Misaajido.
Waraaqo ‘Jacayl’ oo Barack Obama u diray gabadh oo lasoo bandhigay
Maareeyaha guddiga doorashada Kenya oo loo diray "fasax qasab ah"
Sarkaal sare oo ka tirsan guudiga doorashada ee Kenya ayaa qaatay fasax, qeybna kama noqon doono doorashada isbuuca soo socdo.
Shirkadda British Airways ayaa raaligalin siisay qoys dalka Canada u dhashay, kuwaas oo uu cunay kutaan ama dhiqlo xili ay habeenimo ku duulayeen duulimaad shirkadan ah.
Trump oo lagu haysto farshaxan ‘been abuur ah’ oo gurigiisa yaala
Afhayeen u hadashay madxafka ayaa sheegtay in sawirka uu Trump haysto uu yahay mid la been abuuray.
Shirkad qandaraas ku qaadatay baadi goobka diyaaradii Malaysia ee la waayay
Heshiiska ayaa waxa uu dhigayaa in shirkadda lacag la siinayo oo kaliya haddii ay wax soo hesho, haddii ay soo weysana aysan wax lacag ah lahayn.
Sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay, ugu yaraan 281 qof ayaa ku dhimatay in kabadan 300 oo kalena way ku dhaawacmeen qaraxa. Dad badan oo ka careysan ayaana isugu soo baxay dhowr magaalo.
Dalalka Brunei iyo Sweden ayay ugu yartahay dhibaatada iyo dhimashada ka dhalata wasaqowga hawada.
Qaraxii Muqdisho: Dareenkii Shacabka oo dariiqyada usoo baxay